ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ရွှေလက်တွဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကို ပရိတ်သတ်အားအသိပေးပြီးပုံလေးတွေမျှဝေလာတဲ့ စင်သီယာ – Cele Top Stars
ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးနဲ့ရွှေလက်တွဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့ မင်္ဂလာသတင်းကို ပရိတ်သတ်အားအသိပေးပြီးပုံလေးတွေမျှဝေလာတဲ့ စင်သီယာ
December 3, 2021 By admin2Celebrity
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်စင်ဒီယာကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် စင်ဒီယာကတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ ရွှေလက်တွဲ လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်…။
စင်ဒီယာ ကတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ (၂)ရက်နေ့က တရာရုံးမှာ ထိပ်မြှားလက်ထပ်မော်ကွန်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြီတော့ ချစ်သူလေးနဲ့ ရွှေလက်တွဲလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “ဟုတ်ကဲ့ ယူလိုက်ပါပြီ” လို့ မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့အတူမျှဝေဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
Congratulations ပါ စင်စင်ရေ…. ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ ရာသက်ပန်ရိုးမြေကျပေါင်းဖက်နိုင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ မင်္ဂလာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း စင်ဒီယာတို့ ဇနီးမောင်နှံအတွက် မင်္ဂလာဆုမွန်ကောင်းတွေေ တာင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်…။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျစငျဒီယာကတော့ ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယို ဇာတျပို့ဇာတျရံတဈယောကျအနနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတျအခဈြတျောတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျော စငျဒီယာကတော့ သူ့ရဲ့ခဈြသူနဲ့ ရှလေကျတှဲ လိုကျပွီဖွဈကွောငျး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ မြှဝဖေျောပွလာခဲ့ပါတယျ…။
စငျဒီယာ ကတော့ သူ့ရဲ့ခဈြသူနဲ့ မနကေ့ ဒီဇငျဘာလ (၂)ရကျနကေ့ တရာရုံးမှာ ထိပျမွှားလကျထပျမျောကှနျးတငျလကျမှတျရေးထိုးခဲ့တာဖွဈပွီး သူရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနပွေီတော့ ခဈြသူလေးနဲ့ ရှလေကျတှဲလကျမှတျရေးထိုးခဲ့တဲ့အကွောငျးကို “ဟုတျကဲ့ ယူလိုကျပါပွီ” လို့ မင်ျဂလာလကျမှတျရေး ထိုးခဲ့တဲ့ ပုံလေးတှနေဲ့အတူမြှဝဖေျောပွထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ…။
Congratulations ပါ စငျစငျရေ…. ခဈြရတဲ့ ခငျပှနျးနဲ့ ရာသကျပနျရိုးမွကေပြေါငျးဖကျနိုငျပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတှလေညျး ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ မင်ျဂလာဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။ ပရိသတျကွီးတှလေညျး စငျဒီယာတို့ ဇနီးမောငျနှံအတှကျ မင်ျဂလာဆုမှနျကောငျးတှေေ တာငျးပေးခဲ့ကွပါဦးနျော…။
သူမဂေဟာက ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားမရောက်ဖူးသေးတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ကျိုက်ထီးရီုးဘုရားဖူးပို့ပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ဒီနေ့ သူမရဲ့မွေးနေ့မှာ ပရိသတ်တွေဆီကနေ အမိုက်စားမွေးနေ့လက်ဆောင် တွေလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်